Kyaw Min Naing - The SPACE Language Academy
“The SPACE မှာ Zero to Hero level (March 2017) ကနေစပြီး တက်ခဲ့တာ အခုဆို Intermediate level ရောက်လာပါပြီ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား သိသိသာသာတိုးတက်လာတဲ့အပြင် The SPACE နဲ့ပတ်သက်ပြီး အဆင်အပြေဆုံးက သင်တန်းကြေး၊ အချိန် နဲ့ တည်နေရာပါ။ ကျွန်တော်တို့လို ဝန်ထမ်းတွေအတွက် တတ်နိုင်တဲ့ သင်တန်းကြေးဖြစ်ပြီး တစ်ခန်းကို ကျောင်းသားနည်းနည်းပဲ လက်ခံတာမို့ တကယ်ကို ထိထိရောက်ရောက် နဲ့ပေးရတာထက် ပိုတဲ့အရည်အသွေးမျိုးရစေပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် ရုံးချိန်လွတ် သင်တန်းချိန်တွေ ဖြစ်တဲ့အပြင် ရုံးဆင်းပြီး ပင်ပင်ပန်းပန်း သင်တန်းလာတက်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို တက်တက်ကြွကြွဖြစ်အောင် သင်ကြားပေးတဲ့ သင်ကြားရေး နည်းစနစ်တွေကြောင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား သင်ယူရတာ ပင်ပန်းတယ်လို့ ဘယ်တော့မှ မခံစားရစေပါဘူး။ ကျွန်တော့ အင်္ဂလိပ်စာ အသိသာဆုံး တိုးတက်မှုကတော့ အင်္ဂလိပ်လို တကယ်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောတတ်လာတာပါပဲ။ အရင်ဆို အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ အထိအတွေ့ အရမ်းနည်းပြီး အင်္ဂလိပ်လို လုံးဝပြောလို့ မထွက်ခဲ့ဘူး။ အခုတော့ ဘာသာစကားရဲ့ အနှစ်သာရကို နားလည်လာပြီး အင်္ဂလိပ်လို ယုံကြည်ချက်ရှိရှိ ပြောတတ်လာစေတာ The SPACE မှာ တက်ရင်း ရရှိလာတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေပါ။”
“I’ve been joining the SPACE since March 2017 and now I’ve got to Intermediate level. I have become fluent in English and what suit me most are the course fees, the class time and the location of the SPACE Language Academy. The course fees are reasonable for working people like us and there isalimited number of students inaclass, so I can say that the school offers the quality and effectiveness. The classes are open out of office hour. We come to the class after the office, feeling tired, but we never feel reluctant or bored to come to the class because of the teaching techniques that keep us active and motivated. The most obvious improvement is that I can speak out in English with confidence now. I didn’t have much exposure to English, that’s why I didn’t feel confident to speak in English at all. But now, I’ve learnt to realize the essence ofalanguage and become confident to speak in English, all thanks to joining the SPACE Language Academy.”